NANOSTUDIO 1.42 FREE DOWNLOAD, - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
မဆိုစက်ကိုသငျသညျမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်စနစ်တကျဒရိုင်ဘာကိုတက်ကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ရှာတွေ့ဖို့နဲ့ခက်က Ultra ကျွန်မရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မောင်းတစ်ဦးခရီးဆောင်များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install ဖို့ဘယ်လိုဘယ်မှာ၏မေးခွန်းကိုတင်ပြထားတယ်။
က Ultra ကျွန်မရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
သတ်မှတ်ထားသော drive ကိုများအတွက် software ကိုရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုရနိုင်သည့် option ကိုမရှိပါ။ ကျနော်တို့တိုင်းအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ကြောင့်ကြည့်ပါ။
Method ကို 1: တရားဝင် site မှ Download
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ - ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖွင့်ဖို့။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ drive ကိုနှင့် operating system အတွက်လိုအပ်သော software ကို download လုပ်ပါမှသေချာပါသည်။ အပြင်, ဒီလမ်းသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကူးစက်များ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားပါ။
သငျသညျထုတ်လုပ်သူရဲ့ထောက်ပံ့ link ကို၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားဖို့လိုပါတယ်ပထမအဆင့်။
သင်တစ်ဦး button ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းစာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ "ပံ့ပိုးမှု"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့ scroll သောစာမျက်နှာ၏ထိပ် panel ကိုအပေါ် "Loading" ထိုသို့ကျော်ပျံဝဲ။ သင်လိုင်းရွေးချယ်ရမည်တဲ့ menu ကိုဖွင့်လှစ် "ဟုအဆိုပါထုတ်ကုန်များအတွက် Downloads".
လယ်ပြင်၌ "ကုန်ပစ္စည်း" drop-down menu က, သင့်ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select သောဖြစ်ပါသည်အကြှနျုပျ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်က Ultraထို့နောက် button ကို click "Send".
ထုတ်ကုန်များအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၏တစ်ဦးကစာမျက်နှာ။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ device ကိုနှင့် operating system အတွက်လိုအပ်သော software ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကို item စိတ်ဝင်စား WD Drive ကိုအသုံးအဆောင်များ.
သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဆော့ဖျဝဲအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်အတွက်သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Loading".
ဒါဟာ archive ကိုဒေါင်းလုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သီးခြားဖိုင်တွဲသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို extract နှင့်တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူဖိုင်ပေါ်တွင် double click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် installation ကိုစတင်ရန် * .exe.
အဆိုပါပင်မ Setup ကိုပြတင်းပေါက်။ ဒီနေရာတွင်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မခံဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အမှန်ခြစ်အထူး checkbox ကို select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက် button ကို click "Install".
အခုဆိုရင်ပဲတပ်ဆင်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနှင့် device ကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 2: ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေအဖြစ်များသည့်အစီအစဉ်ကို
ဒါ့အပြင်များစွာသောအလိုအလျောက်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ထားသမျှသော device များ detect နှင့်၎င်းတို့၏ software ကိုရွေးချယ်ဖို့အထူးအစီအစဉ်များမှလှည့်နေကြပါတယ်။ အသုံးပြုသူသာသင် install လုပ်လိုသည့်အစိတ်အပိုင်းများကို select လုပ်ပါ, နှင့်အရာမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အားလုံး drivers တွေကို installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနိမ့်ဆုံးကြာပါသည်။ သင်ကငါ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်က Ultra များအတွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲဒီနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ကျနော်တို့အရင်က site ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြရာ, ဒီမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ၏စာရင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
အလှည့်မှာတော့ကျနော်တို့ကဒီအစီအစဉ်ကိုမရရှိနိုင်ပါ drivers တွေနဲ့ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများ၏နံပါတ်အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက DriverMax ရန်သင့်အာရုံကိုဆွဲချင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်အခမဲ့ဗားရှင်းအချို့န့်အသတ် DrayverMaksa ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤနီးပါးကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူးသည်။ မည်သည့်အမှားရှိလျှင်ထို program အလိုအလျောက် software ကို install မလုပ်ခင်တစ်ဦးကိုကိုးကားအမှတ်ဖန်တီးသောကွောငျ့ဒါ့အပြင်သင်အမြဲ, စနစ်တစ်ခု restore လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်သင်သည် DriverMax အတူလုပ်ကိုင်အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်
သင်ခန်းစာကို: DriverMax အသုံးပြု. ဗီဒီယိုယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
ဆော့ဗ်ဝဲ Installation standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီး - သငျအသုံးပွုနိုငျကွောငျးနောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့အားသာချက်သင်သည်မည်သည့်အပိုဆောင်း software ကိုရယူသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုမှတစုံတခုကို download လုပ်ပါရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဒီနည်းလမ်း installed drivers တွေကို device ကို၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးသေချာလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ က Ultra ကျွန်မရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအတွက် software ကို Install လုပ်သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည် "Device Manager"။ ယခင်ကအသေးစိတ်သင်ခန်းစာပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးများအတွက် software ကို install လုပ်ဖို့ကို Windows ရဲ့ standard နည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီးအဖြစ်ကျနော်တို့ဒီမှာကဒီဘာသာရပ်အပေါ်ကျိန်းဝပ်မည်မဟုတ်။
ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်း - သငျ, My နိုင်ငံကူးလက်မှတ်က Ultra များအတွက်ယာဉ်မောင်း installation ကိုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။ သင်ရုံသတိထားပါနှင့်လက်ျာ software ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးသင်သည်ကူညီပေးခဲ့တယ်နှင့်သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာများရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Как написать норм музыку в NanoStudio???Гайд, видео урок (အောက်တိုဘာလ 2019).